SAWIRO:-Garowe oo U Muuqaal Eg Magaalo Gacanta Itoobiya ku Jirta | Voice Of Somalia
SAWIRO:-Garowe oo U Muuqaal Eg Magaalo Gacanta Itoobiya ku Jirta
Soomaalidii hore ayaa caan ku aheyd diidmada gumeystaha iyo cizi balse soomaalida hadda waxaa muuqata in ay ku yartahay gobanimada iyo la xisaabtanka cadawgooda soo jireenka ah ee Itoobiya waloow ay jiraan dad halyeeyo ah oo cadawga ka yuraynaya dhulka.
Magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxay kamid tahay magaalooyinka ku jira gacanta gumeysiga Itoobiya, magaaadaasi ayaa kaga duwan magaalooyinka kale saraakiisha Itoobiya oo waddooyinka si caadi ah shacabka u dhax lugeeya.
Garoowe maamulka Puntand ee kaba qaadka u ah Xabashida Itoobiya ayaa dadka waxma garatada ah ka dhaadhiciyay in ay Xabashida u sacaba tumaan isamarkaana ay walaala yihiin!!.
Duqa magaalada Garoowe ayaa bishii lasoo dhaafay soo saaray wareegto amraysa in dadka kasoo jeeda Koonfurta Soomaaliya ay magaalada isaga baxaan haddii kale ay sharci qaataan, Halka amxaarado ay qeyb ka tahay maamulka.
Dowladda Itoobiya si caadi ah ayay xaflado ugu dhigataa Garowe sida munaasabad shalay ka dhacday magaalada oo ay ka qeyb galeen boqolaal qof soomaali ah oo ay kujiraan madax katirsan maamulka Cabdi Wali Gaas.
Warbaahinta ayaa faafisay sawirro muujinayay dad waayeella ah iyo dhalinyaro Calanka Itoobiya gacanta ku wata kuwaasi oo u dabaal degaya 25 sana guuradii kasoo wareegtay markii la mideeyay waxa loogu yeero qowmiyadaha Itoobiya.
Arrinta la yaabka leh ayaa ah in maamulka dabadhilifka Puntland uu dadkii soomaaliyeed xabashida ugeliyay,meelaha qaar waxaan la kala garan Karin in magaaladu tahay magaalo soomaaliyeed iyo magaalo Itoobiya leedahay marka loo eego sida Itoobiyaanku awood ugu leeyihiin iyo dadka raacsan.
DAAWO:-40 Tahriibayaal Soomaali ah oo Lagasoo Tarxiilayo Wadanka Mareykanka.